कांग्रेसका नेता कम्युनिस्टलाई मार्क्सवाद पढाउँदै ! – Everest Dainik – News from Nepal
कांग्रेसका नेता कम्युनिस्टलाई मार्क्सवाद पढाउँदै !
काठमाडौं, असार ३१ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपा मसालका नेता कार्यकर्ता अहिले माक्र्सवाद सिक्न व्यस्त छन् । कम्युनिस्ट नेता-कार्यकर्तालाई माक्र्सवादबारे प्रशिक्षण दिन माक्र्सवादको ज्ञान भएका विद्वानहरु देश दौडाहमा निस्किएका छन् ।
रोचक पक्ष त यो छ कि, कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई माक्र्सवाद सिकाउने एकजना गुरु भने कांग्रेस नेता छन् । उनी हुन्, प्रदीप गिरि । माक्र्सवादबारे ज्ञानको भण्डार मानिने गिरिले १५ वैशाखमा झापामा कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिए । १० हजार युवालाई माक्र्सवाद पढाउने लक्ष्यसहित झापाबाट सुरु भएको यो अभियानमा गिरिसँगै मोहनविक्रम सिंह, राम कार्की, हरि रोकालगायत प्रशिक्षक छन् ।
२१ र २२ वैशाखमा काभ्रेको धुलिखेलमा भएको प्रशिक्षणमा पनि गिरि प्रशिक्षकका रूपमा उपस्थित थिए । यो प्रशिक्षणमा मोहनविक्रम सिंह, चैतन्य मिश्र, पीताम्बर शर्मालगायतले पनि प्रशिक्षण दिए । २२ असारमा नेपालगन्जमा भएको प्रदेशस्तरको पहिलो माक्र्सवादी प्रशिक्षणमा पनि घनश्याम भुसाल, राम कार्की, गणेश शाहसँगै प्रदीप गिरि पनि प्रशिक्षण दिन पुगेका थिए ।
आफूहरूलाई प्रशिक्षण दिन कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरि उपस्थित भएपछि कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आश्चर्यमा पर्ने गरेका छन् । तर, गिरिको प्रशिक्षण सुन्दै गएपछि सबै प्रभावित भएको नेकपा मसालका नेता समीर सिंहले बताए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
ट्याग्स: COngress, कम्युनिस्टलाई मार्क्सवाद, प्रदीप गिरि, माक्र्सवाद